Indlu engasemva yosapho - I-Airbnb
Indlu engasemva yosapho
Indawo efanelekileyo yendlu yeendwendwe yosapho ikwindawo ephakathi kwezona ndlela zinkulu zesixeko, kwindawo enamagumbi okulala, ekumgama weemitha eziyi-50 ukusuka kwezi ndlela. Sithetha isiRashiya, isiNgesi, iTagik nesiAzerbaijani. Ithuba lokuthenga imizobo yobugcisa, imifanekiso eqingqiweyo, izikhumbuzo. Ithuba lokudlala i-chess kunye noomakhulu bam abaphumeleleyo behlabathi, i-Asia, ukhuphiswano lwe-UNESCO! Amathuba okuqesha iibhayisekile nokulungiselela ukhenketho lweebhayisekile eKyrgyzstan, kufutshane nathi kwiklabhu yasebusuku, iivenkile zokutyela, iipaki, iibhanki
Sisekude ngeekhilomitha eziyi-1.5 ukusuka kwizikhumbuzo eziphambili. Sinikezela ngeenkonzo ezongezelelweyo ezingaphezu kwe-30, ezininzi zazo zisimahla. Siya kukucebisa iindwendwe ukuba zilungise kakuhle indlela yazo kunye nenkqubo yokuhlala umnikazi ebesebenza kwezokhenketho iminyaka engaphezu kweyi-20. Sinika iindwendwe zethu ukutya okumuncis 'iintupha, sizinika ithuba lokupheka ukutya kwazo ukuba ziyafuna. Oomakhulu bam baneminyaka eyi-5, 8, 10 ubudala abadlali be-chess, abaphumeleleyo behlabathi, iAsia kunye nokhuphiswano lweYiputa. Baza kukuvuyela ukudlala neendwendwe ukuba bayafuna.
Kukho iivenkile zokutyela eziliqela, iikhefi, imarike encinci, iivenkile ezinkulu, iibhanki ezikwiimitha eziyi-150 ukusuka kuthi.
Ndiyathanda nyhani ukuncokola, kodwa ihlonipheke kakhulu. Ndikulungele ukuxelela iindwendwe ngamasiko nezithethe zabantu bethu, imbali. Ndiyawuthanda lo msebenzi. Ngamanye amaxesha akukho zindwendwe ibe ndicinga ukuba kube yimpazamo. Hayi ngenxa yemali, akukho ngxaki. Andizange ndidibane nomntu onika umdla.
Ndiyathanda nyhani ukuncokola, kodwa ihlonipheke kakhulu. Ndikulungele ukuxelela iindwendwe ngamasiko nezithethe zabantu bethu, imbali. Ndiyawuthanda lo msebenzi. Ngamanye amaxesha…